Sezenkolo Insika ikhandlela elimhlophe - China Litbright ikhandlela (Shijiazhuang)
Insika sezenkolo ikhandlela elimhlophe
Basic Ulwazi Model No .: G25-0830H Uhlobo: Material tapered: Upharafini Wax Ukusetshenziswa: Funeral, iholide, SPA, Inkolo, Wedding, Party, lokuzalwa, Ikhaya Ukukhanyisa, Ukuhlobisa Umsebenzi: Ukukhanyisa Color: Flavour White: Usayizi Unscented: 7 * 10cm Burning Isikhathi: 8H Icubungula: Isikhunta Long Burning Isikhathi: Amabhokisi Different Packaging engeziwe Info Okufakiwe: ibhokisi emaphaketheni Ukukhiqiza: amathani angu-30 Brand: Litbright Izinto zokuhamba: Ocean, Land, Air Indawo Umsuka: China Supply Ikhono: 3 × 20 'FCL ngayinye Certificate usuku : BS ...
Khombisa No .: G25-0830H
Usayizi: 7 * 10cm
Burning Isikhathi Eside: Amabhokisi Different Packaging
Okufakiwe: ibhokisi emaphaketheni
Ukukhiqiza: amathani angu-30
Supply Ikhono: 3 × 20 'FCL ngelanga
Isitifiketi: BSCI BV CE
amakhandlela Bright kukhona wax paraffine, kungcono umbala omhlophe, yebo nawe angakhetha eminye imibala. Sihlala ukwenza 8 ucezu ibhokisi ngalinye amabhokisi 30 CTN ngamunye, noma amabhokisi ngalinye CTN nokupakisha 50. Umkhiqizo wakho siqu kwamukelekile. Lokhu ikhandlela isetshenziselwa dinner isikhathi, ukukhanya ukuhlobisa ikamelo lakho romantic kakhulu futhi ngeke uphumule wena phakathi dinner isikhathi sakho, amakhandlela akukho iphunga noma kungekho intuthu.
Uhlobo: ikhandlela elikhanyayo
Sebenzisa: Imisebenzi sezenkolo
Indawo Umsuka: Yena Bei, China (Mainland)
6pcsx60box, 8pcs x 30boxes / CTN futhi ngokuvumelana ikhasimende zidinga.
Ukukhiqizwa Umthamo: 4x20ft / ngosuku
esinakho fast kakhulu ukulethwa isikhathi,
izinga kanye ngentengo ephansi.
Isisindo: 10G, 12g, 20g, 22g, 23g, 25g, 28g, 30g, 32g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g, 60g, 75g, 80G, 85g, 90g, 95g, 100g, njll
Ukupakisha: Cellophane, plastic isikhwama, ibhokisi, kraft iphepha
Previous: Ukotini yefilakisi futhi paraffine wax ikhandlela
Okulandelayo: amakhandlela White kusukela 10G ukuba 100g
amakhandlela White kusukela 10G ukuba 100g
Walmart amakhandlela esitolo nge intengo ezinhle
ezimhlophe ikhandlela yasendlini